1.3.4_BOTNY SOFT WAX_ACACA00011 – SHWEMall
Home › 1.3.4_BOTNY SOFT WAX_ACACA00011
1.3.4_BOTNY SOFT WAX_ACACA00011
Ks 9,000 Ks 9,000
Default Title - Ks 9,000 MMK Quantity
ဆေးခြောက်ပြီး အက်ကွဲခြင်း ကာကွယ်
ရက် ၄၅ ခံ
လူ၏အသားအရည် ကို ထိန်းသိမ်းသကဲသို့ ကားဆေးကို ကြာရှည်ခံရန်နှင့် ပြောင်လင်းဆေးရင် BOTNY SOFT WAX ကို အသုံးပြု၍ ထိန်းသိမ်းနိုင်သည်။ အညစ်အကြေး နှင့် အညစ်အကြေးကြောင့်ကျန်ခဲ့သော အရာများကို ဖျောက်ခြင်း၊ ဆေးသားပိုလင်းလားလာစေခြင်း၊ UV ဒဏ်ကာကွယ်ခြင်း နှင်င့ အပူကြောင်း ဆေးသားအက်ခြင်းတို့ကို ကာကွယ်နိုင်ပြီး ရည်ရှည် ပုံမှန် အသုံးပြုသင့်သည်။
အသုံးပြုရန် ကားကိုယ်ထည်ကို ဆေးကျောပါ၊ ပြီးလျှင် ခြောက်အောင်သုတ်ပါ။ ပြီးလျှင် သင့်တင့်သော အားဖြင့် WAX တိုက်ပါ၊ ညစ်ပေနေပါက ပိုသုံး၍ရသည်။ ၁-၂ မိနစ်ခန့် ခြောက်သွားပြီးပါက ပျော့ပြောင်းသော ပိတ်စအခြောက်ဖြင့် တိုက်ပေးလျှင် ရပါပြီ။
သတိ - နေရောင်အောင် ၊ အပူချိန်မြင့်သော ပတ်ဝန်းကျင်တွင် မလုပ်ဆောင်သင့်ပါ။ ကားကိုယ်ထည် ပူနေစဥ်တွင်လဲ မသုံးသင့်ပါ။ ပလပ်စတစ်၊ ရာဘာ၊ မှန်တို့တွင် မသုံးရ။ ကလေးများနှင့် ဝေးရာတွင်ထားပါ။ ခြောက်တွေ့ပြီး အေးမြသော နေရာတွင်ထားပါ။
3.9.1. နေရာစုံ၊ ထောင့်စုံ သန့်ရှင်းဖို့ ဖုန်သန့်စင် ဂျယ်လီ_ACACA00002
Regular price Ks 1,500 Ks 1,500
3.5.1. ကစ်တိုက်၊ ကားဆေး လက်အိတ်_ACAAC00001
Regular price Ks 1,200 Ks 1,200
5.3.1. တံခါးလက်ကိုင်ခွက် ကိုခြစ်ရာမှကာကွယ်ပေးတဲ့ စတစ်ကာ_ACAAC00073
Regular price Ks 800 Ks 800
9.23.2. V-Shape Seat Gap Filler Box_ACAAC00036
5.1.1. Blind Spot Mirror_ACAAC00037